Ngo-Agasti 2020, iqoqo lokuqala likabhiya weBlack Beauty lalethwa ngempumelelo emakethe yaseRussia Far Eastern. Njengophawu lobhiya oludumile lweJINBOSHI brewery, kungokokuqala ukuthi ubhiya iBlack Beauty ingene emakethe yaseRussia. Eminyakeni yakamuva, isidingo sikabhiya osezingeni eliphakeme siyi-ri ...
Njengomunye wabathumeli abaphezulu bamathini amathini ayi-aluminium avela eChina, thina ERJIN CAN sinolwazi futhi siyingcweti ukuxhasa iphakethe lakho likabhiya / lesiphuzo ekanini. Ithini lisetshenziselwa kakhulu ubhiya, iwayini, iziphuzo ezibandayo, iziphuzo zamandla, amajusi, itiye, ikhofi, amanzi akhanyayo, njll futhi thina ...
Umbukiso kaJinan Erjin ku-127th Online Canton Fair
Njalo ngonyaka, iCanton Fair iheha abathengi abavela kuwo wonke umhlaba ukuhlangana eGuangzhou ukuthenga izimpahla, umphakeli womthombo kanye nokushintshana ngolwazi. Kuyaziwa ngokuthi "Umbukiso Woku-1 WaseChina". Ngenxa yokusabalala komhlaba kwe-COVID-19, i-127th Canton Fair ibibanjelwe ...
Sleek 310ml Aluminium Can, I-Aluminium Can 330ml ejwayelekile, I-Aluminium Can 310ml Sleek, I-Aluminium Can 355ml ejwayelekile, I-Aluminium Can 250ml Sleek, Sleek 200ml Aluminium Can,